UDokotela ohlabene ngezindondo zegolide, uDkt Raeesa Bhorat.
Izindondo Zegolide Ezimbili Ekuhlolelweni Ubudokotela Kowase-UKZN
UDkt Raeesa Bhorat wase-UKZN oyirejistra emNyangweni wezobuDokotela Bezangaphakathi, osebenzela e-King Edward VIII Hospital eThekwini, uklonyeliswe izindondo zegolide ezimbili ngamagalelo akhe ekuhlolweni kwe-Fellowship of the College of Physicians (i-FCP), obekungokokuqala kumuntu wase-UKZN.
Isifundiswa esingu-Bhorat siphume phambili ekuhlolweni kwabafundi bazo zonke izikole zobudokotela nezakwamanye amazwe ase-Afrika.
ISigele samaKolishi ezobuDokotela eNingizimu Afrika i-Senate of the Colleges of Medicine of South Africa (i-CMSA), esilawula ukuhlolwa, siklomelise u-Bhorat nge-Suzman Medal 2019 nendondo i-Asher Dubb ngemiphumela emihle ye-FCP.
INhloko yezokwelapha ngaphakathi e-UKZN, uSolwazi Nombulelo Magula, ijabulile ngalezi zindaba. Ithe: ‘Ezokwelapha ngaphakathi zingumkhakha ojulile owenziwe wukwelapha okuvamile nako okuneminxa yezeNhliziyo, uShukela, i-Endokhrinoloji, iGastroentheroloji, iJeriyathriksi, Izifo Ezithelelanayo, iNefroloji, iPhalmonoloji, neZamathambo,’ kusho uMagula.
‘I-CMSA idinga ukuthi orejistra basebenze emikkhakheni yokwelapha okujwayelekile naseminxeni yokwelapha ngaphakathi e-UKZN ebalwa nethuthuke kakhulu ezweni lonke. Ngale kolwazi lokusebenza ezibhedlela zaseThekwini, eMgungundlovu nase-Port Shepstone, orejistra bethu babamba iqhaza ohlelweni lokufundisa lapho bethola khona ithuba emihlanganweni nasezithangami ezehlukene ezibhedlela abasebenza kuzona nasezingeni lokwelapha lonke. Orejistra babasemihlanganweni lapho ongoti bethula khona amava abo orejistra nongoti,’ kusho yena.
‘Egameni lomKhakha wezoKwelapha ngaPhakathi, ngihalalisela u-Raeesa ngomsebenzi wakhe omuhle. Usebenze kanzima, waphumelela nakuba bekunezinselelo ezihambisana nokuqeqeshelwa lo mkhakha onemixhantela eminingi. Siqhenya kakhulu ngaye futhi sifisela yena nabanye orejistra bethu okuhle kodwa,’ kusho uSolwazi uMagula.
U-Bhorat owazalelwa eThekwini, wafunda e-Crawford College eThekwini, waphasa ngamalengiso izifundo eziyisishiyagalombili, wangena ohlwini lwabakhethekile lwe-Independent Examination Board. Wabuye wavelela kwezamasiko nezokuhola kuMatikuletsheni.
Wathola umfundaze ophelele, wakhetha ukuzofundela iziqu zobudokotela e-UKZN ekhuthazwa nguyise uSolwazi Ismail Bhorat, ungoti ohlonishwayo emhlabeni wonke kwezokwelashwa kwemibungu nonina uNkk Nazreen Bhorat.
‘Ekhaya siyabuqonda ubumqoka bemfundo futhi sazisa ulwazi nomsebenzi omuhle nomkhulu wobudokotela. Ngezenzo, umusa nokuphana kwabazali bami, ngiwufakazi wokuzinikela okukhulu mihla yonke,’ kusho u-Bhorat.
‘Ubudokotela yinto enhle nento ekade ngangifisa ukuyenza ngenxa yabazali bami nomsebenzi abawenzayo.’
U-Bhorat waphasa ngamalengiso ezifundweni zobudokotela kwi-obstethriksi neGayinakholoji, ukweLapha ngaPhakathi nezokuHlinza okudidiyele. Uyilungu le-Golden Key International Honour Society ehlonishwayo yase-UKZN kanti ufisa ukubuye abe ngungoti wezifo zenhliziyo.
Njengoba esephumelele izivivinyo ze-FCP, uNks u-Bhorat usengaba ngudokotela ongungoti ekupheleni konyaka.
Ngale kothando lwakhe lobudokotela uthanda ukudlala upiyano, izincwadi zesiNgisi, izinkondlo nokubhala.
Amagama: ngu-Maryann Francis
Kwelekelelwa Izingane Ukuthi Zibhekane Nokwesaba i-COVID-19
Isifundiswa Sezamakhompyutha Engxoxweni Yobuchwepheshe Obuveza Ubuso
Abafundi Base-UKZN Baseka Uhlelo Lokufundela Emakhaya